July 29, 2020 - Chothale
पुरुष बिना महिलालाई केही फरक पर्दैन तर, महिला विना पुरुषको जिन्दगी के हुन्छ ?
July 29, 2020 July 29, 2020 chothale
पुरुष र महिलामा को उत्कृष्ट ? भनिन्छ तर मेरो विचारमा महिला नै उत्कृष्ट छन् किनभने महिला सहनशील, सुन्दर र गर्भ धारण गरेर सन्तान जन्माउने प्राणी हुन् । पुरुषप्रधान समाजमा विभिन्न बोझ र जिम्मेवारीले थिचिनुका बाबजुद सारा चुनौती चिरेर पनि नेपाली महिला उच्च पदमा पुग्न सफल छन् । महिलामा भएका यस्ता गुण, क्षमता एवं विशेषताले उनीहरूलाई उत्कृष्ट बनाएको छ । म महिला नै हुनुपर्ने एउटै मात्र कारण छैन । शारीरिक रूपमा पुरुष भएर जन्मिए पनि भावनात्मक रूपमा म महिला हुँ । मभित्रको विचार, व्यवहार, धैर्य, सहनशीलता अनि ममता नै म महिला…
समाचाररोचक कुराहरुLeaveacomment
लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर भारतलाई फेरी नेपालले दियो यस्तो जवाफ…सक्दो सेयर गरौँ !
काठमाडौं । नेपालकै भूमीमा नेपालीलाई प्रवेश नदिनु भन्दै दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएको भारतलाई नेपालले कडा जवाफ दिएको छ । भारतले पठाएको पत्रको जवाफ दार्चुला प्रशासन कार्यालयले पठाएको हो । भारतीको धार्चुला प्रशासनले नेपाललाई पत्र पठाउँदै कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालीको सुरक्षाकर्मीलगायतको चहलपहल बढेको भन्दै रोक्न माग गरेको थियो । त्यसको जवाफ दार्चुला प्रशासनले कडा रुपमा दिएको छ । दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले आफ्नै भूमीमा नेपालीलाई आवत जावतमा नरोक्ने भन्दै जवाफ पठाएको बताएका छन् । भारतले नेपाली भूमीलाई आफ्नो दावी गर्दै त्यहाँ आवत जावतमा रोक लगाउन भनेको थियो…
समाचारकेपी ओली, सिमा बिबादLeaveacomment
यस्तो छ, रुसले बनाएको को’रोनाको खोप , इजरायलले भन्यो हामी किन्न तयार छौ !